ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အနေနှင့် သိထားသင့်သည့် ခွင့်ရက်အမျိုးအစားများ | Mandalay Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Mandalay | Mandalay Yellow Pages
ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့ ဝန်ထမ်းများအတွက် ထိုဝန်ထမ်းများနဲ့ အလုပ်ရှင် သဘောတူညီချက်အတိုင်း သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရေး အခါကြီးရက်ကြီးများကို လစာမရှိ အလုပ်ပိတ်ရက်အဖြစ် ခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်။
1. Earned Leave (Annual Leave) - လုပ်သက်ခွင့်
ဝန်ထမ်းသည် မိမိရဲ့အလုပ်တွင် အနည်းဆုံးလုပ်သက် ၁ နှစ်ရှိရင် လစာငွေဖြတ်တောက်ခြင်းမရှိဘဲ ဥပဒေအရ လုပ်သက်ခွင့် ၁၀ ရက် တစ်ဆက်တည်းခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဟာ ၁၂လ(၁နှစ်) လုပ်သက်မှာ လတိုင်း အနည်းဆုံး ရက် ၂၀ ပြည့်အောင် အလုပ်ဆင်းရမှာဖြစ်ပြီး ရက် ၂၀ မပြည့်တဲ့ လတိုင်းအတွက် မိမိလုပ်သက်ခွင့်ကနေ တစ်ရက်ကျစီအဖြတ်ခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်သက်ခွင့်ကို အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား သဘောတူရင် (၃) နှစ်အထိစုထားလို့ရပါတယ်။
တကယ်လို့ လုပ်သက်ခွင့်ရ ဝန်ထမ်းက လုပ်သက်ခွင့်မရယူရသေးခင် အလုပ်ထွက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခံရခြင်း (သို့မဟုတ်) သေဆုံးပါက အလုပ်ရှင်က ငွေကြေးအနေနဲ့ပြန်ထုတ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
2. Casual Leave - ရှောင်တခင်ခွင့်
ဝန်ထမ်းတိုင်း အလုပ်စဝင်တာနဲ့ ဥပဒေအရ လစာငွေဖြတ်တောက်ခြင်းမရှိဘဲ ရှောင်တခင်ခွင့် တစ်နှစ်တွင် စုစုပေါင်း ၆ ရက်ရရှိပါတယ်။
သို့သော် ဝန်ထမ်းက ခရီးဝေးသွားရန်အကြောင်း (သို့မဟုတ်) မိမိကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာဓလေ့အစဉ်အလာရ အကြောင်းထူးမှတပါး တစ်ကြိမ်ရင် အများဆုံး ၃ ရက် ထက်ပိုယူလို့ မရပါ။ ရှောင်တခင်ခွင့်ကို အခြားမည်သည့်ခွင့်ရက်အမျိုးမျိုးနဲ့မှ ပေါင်းစပ်လို့မရပါ။
ထူးခြားချက်အနေနဲ့ဝန်ထမ်းက ရှောင်တခင်ခွင့်ကို သက်ဆိုင်ရာနှစ်အတွင်းမယူရင် ဒီခွင့်ရက်ပျက်ပြယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
3. Medical Leave - ဆေးလက်မှတ်ခွင့်
ဆေးလက်မှတ်ခွင့်ကို ဝန်ထမ်းတိုင်း တစ်နှစ် ရက်ပေါင်း ၃၀ ရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး လုပ်သက် ၆ လမပြည့်သေးပါက ဆေးလက်မှတ်ခွင့် ရက်ပေါင်း ၃၀ သည် လစာမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သတိပြုရမယ့် အချက်အနေနဲ့ ဝန်ထမ်းက ဆေးလက်မှတ်ခွင့်ကို သက်ဆိုင်ရာနှစ်အတွင်းမယူုရင် ထိုခွင့်ရက်ပျက်ပြယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေအရ ဆေးလက်မှတ်ခွင့်ကို လုပ်သက်ခွင့်ရက်နဲ့ တစ်ဆက်တည်း ခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။
4. Maternity Leave or Paternity Leave - မီးဖွားခွင့်
ဥပဒေအရ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ မီးမဖွားမီ ရက်သတ္တပတ် ၆ ပတ်နှင့် မီးဖွားပြီး ရက်သတ္တပတ် ၈ ပတ် ကို လစာငွေဖြတ်တောက်ခြင်းမရှိဘဲ မီးဖွားခွင့်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေအရ မီးဖွားခွင့်ရက် ကို ဆေးလက်မှတ်ခွင့်ရက်နဲ့ ဆက်စပ်ခံစားခွင့်ပြုထားပါတယ်။
လူမှုဖူလုံရေး (SSB) ပေးဆောင်ခြင်း မရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေလည်း ခွင့်ရက်နဲ့ အလုပ်ပိတ်ရက်ဥပဒေပါ ခွင့်တွေကို ခံစားခွင့်ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတိုင်း ခွင့်အမျိုးအစားအသီးသီးကို မိမိတို့လုပ်သက်ရဲ့ အချိုးကျအတိုင်း ခံစားရရှိနိင်ဖို့ ခွင့်ရက်အမျိုးအစားတွေနဲ့ ခံစားခွင့်ဥပဒေတွေကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
What's New Read 34439 times